Shina mivezivezy DC Fananganana orinasa sy mpanamboatra | Meiling
Hery (Max) 22W
Color Mainty, fotsy, maintso
lafiny 330 * 320 * 516/930 (MG)
Fonosana refy 365 X 319 X 400 (mm)
Lanja afa-karatsaka 4.3KG
Safidy haingana Hafainganana 9 amin'ny maody 5
Takelaka fikirakirana Fanaraha-maso mikasika
1. Haingam-pandeha sy fipetrahana mpankafy marobe
Ny rivotra voajanaharin'ny mpankafy mivezivezy marani-tsaina dia manana traikefa tena tsara izay tsy mahatsapa aretin'andoha rehefa mitsoka mandritra ny fotoana ela, ary nanjary feno fandinihana sy fanajana kokoa noho ny filan'ny famahan-drivotra amin'ny scenario samihafa, ary manana fomba dimy mifanaraka amin'ny isan'andro Fomba haingam-pandeha 5 namboarina manokana: ara-dalàna, voajanahary, matory, reny sy foetus, ny endrika ECO ampifanarahana amin'ny safidinao tiana hahazoana fampiononana tsara indrindra.
2. Famatsian-drivotra feno zoro malalaka, mampiroborobo ny fivezivezena anaty trano mandritra ny fizaran-taona
6 metatra ny famatsian-drivotra lavitra dia manafaingana ny fivezivezena, raha ampiasaina amin'ny toetry ny rivotra, dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fampangatsiahana sy ny fanafanana koa.
3. Fanasiana marolafy manome rivotra mamelombelona
Tsara ny manamarika fa misy karazany 15 ny zoro mihozongozona ho an'ny mpankafy mivezivezy Sapphire, izay 10 °, 40 °, 100 ° miakatra sy midina, 30 °, 60 °, ary 90 ° havia sy havanana. Azo ampiasaina ambony sy ambany ary havia sy havanana izy io, ary azo avadika amin'ny lalana iray ihany koa. Azo ahitsy tsara izy io mba hanomezana izay ilain'ny mpitovo mitsoka na olona maromaro milamina.
4. maotera DC mangina efa mandroso, 11dBA ihany ny tabataba
70% ambany noho ny mpankafy efa misy, mangina ary mampionona, manome anao torimaso tsara mandritra ny alina manontolo.
5. Famolavolana kofehy 15 sosona roa sosona roa sosona
Izy io dia namboarina tamin'ny lelany ivelany 9 sy ny kofehy 6 anaty, ny kofehy kambana 15 sosona, ny haben'ny rivotra vokarin'ny lozisialy mpankafy dia manodidina ny 1,8 heny noho ny faribolan'ny mpiorina anaty faribolana anatiny, ary ny fantsom-bolan'ny mpihira dia nohamarinina ary namboarina, izay mahatonga ny hafainganam-pandehan'ny rivotra roa hafa. Mifangaro mifangaro ny airflow; tsy mitovy amin'ireo mpankafy nentim-paharazana sy mpankafy fivoaran'ny rivotra hafa, ny mpankafy moka mivezivezy manan-tsaina dia manana halaviran-drivotra lava kokoa, faritra be rivotra, ary onjam-peo malefaka kokoa. Toy ny morontsiraka marivo, entin'ny rivotra mahery izy, mety ho an'ny be antitra sy olona salama saina.
6. Azo esorina amin'ny fampiasana latabatra.
Azo ampiasaina amin'ny latabatra sy ny gorodona izy io. Ny haavon'ny endriny roa dia nosedraina matetika ary namboarina tamin'ny haavony tsara indrindra izay mety kokoa amin'ny fampiasan'ny olona isan'andro. 93cm ho an'ny mpankafy ny gorodona ary 51.6cm ho an'ireo mpankafy latabatra. Na mipetraka eo amin'ny sezalà io, mamaky boky, milalao miaraka amin'ny zazakely amin'ny karipetra, na mandry eo am-pandriana, dia misy zoro tsara kokoa ho anao.
7. Mpisoroka moka
Ny menaka manadio moka dia ampidirina ao anaty tadin-drivotra mahery sy midadasika, ary lehibe kokoa ny haben'ny moka. Miaraka amin'ny famatsian-drivotra an-doha mihetsika amin'ny zoro malalaka, dia azo entina isaky ny vazan-trano izy io, mba hahafahan'ny fianakaviana iray manontolo mankafy fahavaratra mangatsiaka tsy misy manaikitra moka.
8. efijery mikasika HD marani-tsaina vaovao
Ny base dia mampiasa efijery PC HD hamono azy, izay tsy mitovy amin'ireo bokotra nentim-paharazana. Tsotra sy maoderina izy io: malefaka ny mazava ary tsy mahavariana. Ny efijery dia ho faty ao anatin'ny 10 segondra tsy misy fandidiana.
Manaraka: Mpankafy manadio tilikambo tsy misy fotony
Fanodinana rivotra DC Fan
Fanala an-tongotra Bldc
Dc Mpiorina Mitsangana Fan